မောငျ(စှယျစုံကမျြး): July 2014
Author Zaw Min Than at 6:48:00 PM0မှတ်ချက်
မင်္ဂလာပါ ခမျာ IOS 7.1.2 jailbreak လုပ်နည်း မြန်မာဖောင့်နဲ့ကီးဘုတ်
ထည့်နည်းလေးကို ကျနော် လော့လာမိသလောက် ပြန်လည်မျှဝေ လိုက်
ပါတယ် မြန်မာဖောင့် အဆင်မပြေသူများအတွက်သာ ရည်ညွှန်းပါတယ်
ခမျာ အောက်ကဆော့ဝဲအား ဒေါင်းပါ ဖုန်းမှာ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း
ထားလိုက်ပါ ဆော့ဝဲ ဒေါင်းပီးသားကို ဖွင့်လိုက်ပါ ပီး ရင် ကလစ်
တစ်ချက်နှိပ် လိုက်တာနဲ့ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ် ခမျာ
ကျနော် ဗွီဒီယို ဖိုင်လေးနဲ့ လုပ်ပြထားပါတယ် အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်
လို့မျှော်လင့်ပါတယ် အမှားပါခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါခမျာ ကျနော်
လုပ်တက် သလောက် အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြထားပါတယ်
jailbreak ပြုလုပ်နည်း ဗွီဒီယို
cydia ဖွင့်ပါ Sources,Edit,Add မှာcydia.macforus.com/ အပ်ပါ
Zawgyi ios 4.3 font ကိုအရင်အင်စတောလုပ်ပါ ပီးရင် MMKeyboard
for ios7+ ကို အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ အဆင်ပြေပါစေ........
Author chitphyo at 10:54:00 AM0မှတ်ချက်
Labels: i-Phone မြန်မာစာထည့်နည်း, Jailbreak ပြုလုပ်နည်းသိချင်ရင်
Android ဖုန်မှာ Myanmar Font စာလုံးဒီဇိုင်းအလှ10 မျိုးပြောင်းသုံးချင်ရင်
Download - Mssk.myanmar.designfont.apk
Author MSSK at 7:40:00 PM0မှတ်ချက်
Android ဖုန်းအတွက် အသံလည်းကျယ် Auto ပိတ်တဲ့ အချိန်ဇယားပါတဲ့ Player
အိပ်ခါနီးဆို ဘယ်ချိန် ပိတ်မလဲ အချိန်မှန်းပိတ်လို့ ရပါတယ် ထူးခြားတယ်
Download - maven blueplayer.apk
Author Anonymous at 9:55:00 PM3မှတ်ချက်
Author Pyae Phyo (MMiTD) at 8:31:00 PM0မှတ်ချက်
လူပျိုကြီးဂုဏ် ( လူပျိူကြီးစစ်စစ်များအတွက် )
အာဏာရှင်ကို အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာ နဲ့တူတူပဲ …
ရန်သူကို သေနတ်နဲ့ချိန်ခွင့်ပေးလိုက်တာ …
ဆေးခတ် မီးရှို့သွားရင်ကော ?
ရ တာ နာ . . . ခဲ့ရင်ကော ?
လူလိမ္မာ(လူနည်းစု)တွေပဲ အိမ်ထောင်မပြုသင့်မှန်းသိကြတာ . . .
Credit: Ulay Kyi
Author MSSK at 8:17:00 PM0မှတ်ချက်
Iphone ကိုင်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အရမ်းလန်းတဲ့ photo slideshow app လေးပါ
IOS ကိုင်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အရမ်း လန်းတဲ့ slideshow app လေးပါ
အထဲမှာ လုပ်ပီးသား frames တွေပါပါတယ် ဓာတ်ပုံ တို့ ကိုယ့်ထည့်ချင်တဲ့
သီချင်းတို့ ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ တော်တော်ကောင်းပါတယ် applestore မှာ
ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးဝယ်ရပါတယ် မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)မှာ အခမဲ့ဒေါင်းယူပါ
Author chitphyo at 11:49:00 AM2မှတ်ချက်
Labels: i-Phone အတွက် Slide Show Maker
Window 8 သမားတွေအတွက် မြန်မာစာ ပြဿနာ
ပထမဆုံးတော့ Zawgyi Blogday ဖောင့်ကို Download ယူအင်စတောလုပ်ပါ
အင်စတောလုပ်ပြီး Restart ချ ဖတ်မရ ရေးမရ အဆင်မပြေရင် တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်
Control Panel ကိုသွား
Language ဆိုတာကို နှိပ်
Advance Setting ထဲကိုဝင်
ဒုတိယမြောက်နေရာမှာ Default input method မှာ Zawgyi ထားလိုက်
မြန်မာစာမြင်ရပီး စာရိုက်မရတာ ကီးဘုတ်မပေါ်တာဆိုရင်
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Option ကနေ အမှန်ချစ်ပေး OK လုပ်လိုက်ပါ
Window 8- Window764 bit ကွန်ပျုတာအတွက် သီးသန့် ကီးဘုတ်ထည့်
32 bit တွေမှာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် 64 မှာ မြန်မာစာ အတုံးဖြစ်တာတွေ
ကီးဘုတ်မပေါ်လို့စာဖတ်ရပြီး မြန်မာစာရိုက်မရတာတွေအတွက်တော့
အောက်က ကီးဘုတ်ယူသုံးပါ အဆင်မပြေသူများ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ
ဒီမှာ Download ယူပါ - Zawgyi-keyboard-for windows 8,7, 64bit
ဒီမှာ Download ယူပါ -Zawgyi Blog Day Font and Keyboard window 8
မြန်မာစာနဲ့ ပတ်သက်ရင် အောက်ကလင့်ကို နှိပ်ဖတ်လိုက်ပါ
Zawgyi Font ပြဿနာဖြေရှင်းရန် (8)
Author မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) at 8:30:00 PM5မှတ်ချက်
Labels: Window 8 ဆိုင်ရာ, Zawgyi Font ပြဿနာဖြေရှင်းရန်
Author Anonymous at 7:24:00 PM0မှတ်ချက်
ဗေဒင်ဝါသနာပါသူများအတွက် ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ တားရော့ဟောနည်း
Dwonload - ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ တားရောံဟောနည်း
Author Anonymous at 7:19:00 PM 1 မှတ်ချက်
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ အာဘွားစီးရီးအယ်ဘမ်တစ်ခုလုံးရဲ့ MP3 ဒေါင်းလုပ်ယူချင်ရင်
သိသလို မသိသလိုနဲ့ 
Download - အာဘွားအယ်ဘမ် -MP3 - Zippyshare
Download - အာဘွားအယ်ဘမ် -MP3 - Mediafire
Photoshop ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (21)
Speaking စာအုပ်များ (9)
Wifi Hacking နည်းလမ်းစာအုပ် (3)
နည်းပညာ စာအုပ်များ (81)
Html သင်ခန်းစာ (9)
Author Anonymous at 12:21:00 PM 1 မှတ်ချက်
Labels: သီချင်းစီးရီးတစ်ခုလုံး Down ရန်
Android ဖုန်းအတွက် အသံလည်းကျယ် ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်တဲ့ Player
ဒီဟာလေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကို အရင်ဆုံး ပြောပြမယ် ။သီချင်းသံကို ပိုကျယ်စေတယ်
သီချင်းနားထောင်နေရင်း နောက်တစ်ပုဒ် ပြောင်းချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဖုန်းကို လက်နဲ့ 
ကိုင်ထားဖို့ မလိုပါဘူး စားပွဲပေါ်တင်ထားဆိုရင် ခုံကို ထုလိုက်ရင် ပြောင်းပေးတယ်
အိတ်ကပ်ထဲမှာ ထည့်ထားရင် လက်နဲ့ တစ်ချက်ပုဒ်လိုက် နောက်တစ်ပုဒ်ပြောင်းပီ
ဘေးနားမှာ ထားထားတယ်ဆိုရင်လည်း ဖုန်းပေါ်ကို လက်ကလေး ၀ဲကြည့်လိုက်ပါ
နောက်တစ်ပုဒ်ပြောင်းသွားပါတယ် ။ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်
အတော်လေး လန်းတယ် Player လေးပါ ။ သုံးကြည့်ရတာ တစ်မျိုးထူးခြားတာပေါ့
စမ်းကြည့်ချင်ရင် အောက်မှာ ယူသုံးကြည့်ပါ ဖလမ်းဖလမ်းလေး...အသံစွာတယ်..။
Download - Sensor Music ( Special Effect)
Author Anonymous at 12:17:00 PM4မှတ်ချက်
ဖုန်းကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ နောက်တစ်ပုဒ်ပြောင်းစေမယ့် Player အလန်းဇယား
သီချင်းကို ပုံထည့် ။ အဲ့သီချင်းကို သူများပေး ပုံရောပါသွားတယ်. လှုပ်လို့ ရပီ
Download - Android tgb Player Pro
Author Anonymous at 12:16:00 PM 1 မှတ်ချက်
Android ဖုန်းကနေ ဂီတာတီး စန္ဒယားတီး အစုံပလုံတီးရတဲ့ ဆော့ဝဲ
Download - Musical Pro apk
Author Anonymous at 12:15:00 PM 1 မှတ်ချက်
Android Phone အတွက် Barcode Scanner
ကုဒ်နှစ်ခုစလုံး ဖတ်လို့ ရပါတယ် ဖုန်းမှာ ထည့်ထားပီး
ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါ လိပ်စာကတ်တွေမှာ QR ကုဒ်ပါရင်
ဖုန်းဖွင့်ပီး Scan ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ် သုံးချင်သူများအတွက်
အောက်ကလင့်မှာ Download ယူ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်
Download - Barcode Scanner apk
Author Anonymous at 12:13:00 PM0မှတ်ချက်